हिमालयन बैंकको खुद नाफा दुई अर्ब नाघ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ? – Nepal Journal
हिमालयन बैंकको खुद नाफा दुई अर्ब नाघ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
Posted By: Nepal Journal August 13, 2017 | २९ श्रावण २०७४, आईतवार ११:४१
हिमालयन बैंक (HBL) ले गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब १७ करोड ६४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एक अर्ब ९३ करोड ५९ लाख साठ हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको थियो । बैंकले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा १२ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढाएको हो ।
निक्षेप तथा कर्जाको आकार बढाएको बैंकले खुद व्याज आम्दानी नौ प्रतिशतले बढाएर तीन अर्ब ७६ करोड रुपैंया पुर्याएको छ । ९२ अर्ब ८८ करोड ११ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले ७७ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस क्रममा बैंकले निष्कृय कर्जा अनुपात १.२३ प्रतिशतबाट ०.८७ प्रतिशतमा झारेको छ ।
बैंकले ९१ करोड ५२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राइट ब्याक गरेको छ भने संभावित जोखिमका लागि ८१ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ सुरक्षित गरेको छ ।
चुक्ता पुँजी छ अर्ब ४९ करोड १६ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ५ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ सञ्चित छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३३ रुपैयाँ ५३ पैसा तथा प्रतिसेयर नेटवर्थ १८१ रुपैयाँ २५ पैसा कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी पुर्याउन बैंकले डेढ अर्ब रुपैंया बराबरको बोनस बितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
काबेली बी वानको २५ मेगावाट बैशाखदेखि राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने
निर्माणकाे कार्यले तीव्रता पाउने बेला हार्डवेयर व्यवसायी आन्दोलित
अर्थ/बजार, प्रविधि, मुख्य खबर
आफू खुशी निर्माण सामाग्रीको मुल्य बढाउनेलाई कारबाही
Be the first to comment on "हिमालयन बैंकको खुद नाफा दुई अर्ब नाघ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?"